Yosef Kyerɛɛ Farao Daeɛ Ase | Suasua Wɔn Gyidie
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maya Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
SUASUA WƆN GYIDIE | YOSEF
“Ɛnyɛ Onyankopɔn na Ɔkyerɛ Daeɛ Ase?”
NÁ Yosef nam abrannaa bi a ɛso yɛ sum so. Wakɔyɛ adwumaden ama mfifire rete no waawaa sɛ nsuo. Ná awia kataban a ɛrebɔ Egypt no ama afiase hɔ ayɛ hye te sɛ fononoo a wɔasɔ mu gya. Ɛrekame ayɛ sɛ tokuro biara nni afiase hɔ a na Yosef nnim. Seesei deɛ, na nea abrabɔ de no abɛwie nie. Ɛwom sɛ na wɔbu no paa wɔ afiase hɔ deɛ, nanso ɔyɛ dɛn koraa a ɔda afiase.
Ná Yosef hwɛ ne papa nnwan wɔ Hebron mmepɔ so, enti ɛbɛtumi aba sɛ na n’ani taa kɔgyina hɔ paa! Berɛ a Yosef dii bɛyɛ mfeɛ 17 no, ne papa Yakob somaa no, na ɛno na ɛmaa no kɔdii akyirikyiri baabi a wamma fie bio. Ná ɔwɔ fahodie wɔ ne fie, nanso seesei deɛ ɛte sɛ nea abɔ no koraa. Ahoɔyaa nti, Yosef nuanom faa ne ho tan, na wɔtɔn no maa no kɔyɛɛ akoa wɔ Egypt. Ɔduruu hɔ no, ɔkɔyɛɛ akoa wɔ Egypt panin bi a wɔfrɛ no Potifar fie. Ná ne wura nni ne ho agorɔ koraa kɔsii sɛ ne wura no yere bɔɔ no soboɔ sɛ wato no mmonnaa; ɛno na ɛde no kɔpuee afiase. *—Genesis, ti 37 ne 39.
Saa berɛ no, na Yosef adi mfeɛ 28, na na wayɛ akoa asan ada afiase bɛyɛ mfeɛ 10. Sɛ yɛbɛka a, na n’anidasoɔ asa. Enti berɛ bi bɛba a ɔbɛnya ahofadie bio? Ne papa a wabɔ akɔkoraa a ɔdɔ no, ne ne nua kumaa Benyamin nso, na ɔbɛsan ahunu wɔn bio? Ná ɔbɛhyɛ afiase amena mu hɔ ara akɔsi dabɛn?
Woate nka te sɛ Yosef pɛn? Woyɛ aberanteɛ anaa ababaa a, ɛnyɛ berɛ nyinaa na nneɛma bɛkɔ yie sɛnea wohwɛ kwan. Ɛtɔ da a, asɛm bi bɛtumi ato wo ama ayɛ te sɛ nea anidasoɔ asa anaa woyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie. Momma yɛnhwɛ nea yɛbɛtumi asua afiri Yosef gyidie mu.
“YEHOWA KƆƆ SO ARA DII YOSEF AKYI”
Ná Yosef nim sɛ ne Nyankopɔn, Yehowa, werɛ remfiri no da. Ɛno na ɛboaa no maa ɔtumi gyinaa pintinn. Berɛ a Yosef da afiase wɔ obi man so mpo no, Yehowa faa ɛkwan bi so hyiraa no. Enti yɛkenkan sɛ: “Yehowa kɔɔ so ara dii Yosef akyi, na ɔyii n’adɔeɛ kyerɛɛ no maa no nyaa ɔpanin a ɔhwɛ afiase hɔ no anim adom.” (Genesis 39:21-23) Berɛ a na Yosef da afiase no, ɔbɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛsɔ Onyankopɔn ani na ama no anya biribi agyina so ahyira no. Ɛbɛyɛ sɛ berɛ a ɔhunuu sɛ Onyankopɔn di n’akyi daa no, n’akoma tɔɔ ne yam paa!
Enti na Yehowa bɛma Yosef aka afiase hɔ? Ná Yosef nnim sɛnea nneɛma bɛkɔ akɔwie, nanso ɛda adi sɛ ɔkɔɔ so bɔɔ ne Nyankopɔn mpaeɛ. Sɛnea ɛtaa si no, ɔnyaa ne mpaebɔ no ho mmuaeɛ berɛ a n’ani nna. Da koro bi, wɔde mmarima mmienu bi kɔtoo afiase hɔ maa ɛhɔ yɛɛ bagyabagya. Ná wɔyɛ Farao adwumayɛfoɔ no mu mpanimfoɔ. Wɔn mu baako yɛ ɔhene no paanootofoɔ panin, ɛnna baako nso yɛ ne nsahyɛfoɔ panin.—Genesis 40:1-3.
Awɛmfoɔ panin no de saa mmarima mmienu no hyɛɛ Yosef nsa. * Anadwo bi, wɔn mu biara soo daeɛ bi a na ɔnhunu nea ɛkyerɛ. Adeɛ kyeeɛ no, Yosef hunuu sɛ biribi ha wɔn enti ɔbisaa wɔn sɛ: “Adɛn nti na nnɛ mo anim ayɛ bosabosaa saa?” (Genesis 40:3-7) Ebia sɛnea ɔtee n’anim kyerɛɛ mmarima no maa wɔbɛhunuu sɛ ɔyɛ obi a wɔbɛtumi aka nea ɛha wɔn no akyerɛ no. Ná saa nkɔmmɔ no de nsakraeɛ bi rebɛba Yosef abrabɔ mu, nanso ɔno deɛ, na ɔnnim. Sɛ Yosef ante n’anim ammisa nea ɛha wɔn a, wohwɛ a anka wɔbɛtumi ne no abɔ nkɔmmɔ? Nea ɔyɛe no bɛtumi ama yɛabisa yɛn ho sɛ, ‘Ɛyɛ a mekyerɛ me yɔnko nnipa ho anigyeɛ de kyerɛ sɛ mewɔ Onyankopɔn mu gyidie?’
Yosef kyerɛɛ sɛ ɔdwene wɔn a na ɔne wɔn da afiase no ho, na ɔdi wɔn ni
Mmarima mmienu no ka kyerɛɛ Yosef sɛ, daeɛ a wɔnhu ne ti nhu ne nan no agya wɔn tipaeɛ, na nea ɛha wɔn koraa ne sɛ wɔnni obi a ɔbɛkyerɛ aseɛ ama wɔn. Ná Egyptfoɔ mfa daeɛ nni agorɔ, na na wɔde wɔn werɛ nyinaa hyɛ wɔn a wɔkyerɛ sɛ wɔtumi kyerɛ daeɛ ase no mu. Ná mmarima mmienu no nnim sɛ Yehowa, Yosef Nyankopɔn no na wama wɔaso daeɛ no. Nanso Yosef deɛ, na ɔnim. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnyɛ Onyankopɔn na ɔkyerɛ daeɛ ase? Monka [daeɛ no] nkyerɛ me.” (Genesis 40:8) Asɛm a Yosef kaeɛ no, ɛso da so ara wɔ mfasoɔ ma wɔn a wɔde koma pa sua Bible nyinaa nnɛ. Sɛ nyamesomfoɔ nyinaa wɔ ahobrɛaseɛ a ɛte saa a, anka ɛyɛ paa! Ɛsɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase na ama yɛagye atom sɛ Onyankopɔn nko ara na ɔbɛtumi aboa yɛn ama yɛate Bible no ase yie.—1 Tesalonikafoɔ 2:13; Yakobo 4:6.
Nsahyɛfoɔ no na ɔdii kan kaa n’asɛm kyerɛɛ Yosef. Ɔka kyerɛɛ Yosef sɛ ɔsoo daeɛ bi, na ɔhunuu bobe a ayi nkorabata mmiɛnsa, na aso aba pii. Bobe no bereeɛ, na nsahyɛfoɔ no kyĩ guu Farao kuruwa mu. Amonom hɔ ara, Yehowa maa Yosef tee daeɛ no ase. Ɔka kyerɛɛ nsahyɛfoɔ no sɛ bobe a ayi nkorabata mmiɛnsa no yɛ nnansa; kyerɛ sɛ nnansa ntam no, Farao bɛsan de nsahyɛfoɔ no asi ne dibea so. Asɛm yi maa nsahyɛfoɔ no akoma tɔɔ ne yam. Afei Yosef srɛɛ no sɛ: “Yɛ me adɔeɛ na ka me ho asɛm kyerɛ Farao.” Yosef ka kyerɛɛ no sɛ, wɔkyeree no firii ne kurom de no sieeɛ, na wɔde no abɛto afiase a nteaseɛ biara nnim.—Genesis 40:9-15.
Asɛmpa a Yosef ka kyerɛɛ nsahyɛfoɔ no hyɛɛ paanootofoɔ no nkuran maa ɔno nso bisaa ne daeɛ no ase. Ɔkaa sɛ daeɛ no mu no, ɔhunuu nkɛntɛn mmiɛnsa a paanoo wom. Afei nso, ɔhunuu sɛ nnomaa redi aduane a ɛwɔ kɛntɛn baako mu wɔ ne tiri so. Yehowa maa Yosef hunuu nea saa daeɛ no nso kyerɛ. Nanso na ɛrenyɛ asɛmpa mma paanootofoɔ no. Yosef kaa sɛ: “Ne nkyerɛaseɛ nie: Nkɛntɛn mmiɛnsa no yɛ nnansa. Aka nnansa na Farao ayi wo afiri ha na wayi wo tiri afiri so, na ɔbɛsɛn wo dua so, na nnomaa bɛdi wo nam.” (Genesis 40:16-19) Sɛnea Onyankopɔn nkoa anokwafoɔ de akokoɔduro ka Onyankopɔn asɛmpa ne atemmuo a ɛreba ho asɛm no, saa ara na Yosef nso yɛeɛ.—Yesaia 61:2.
Nnansa akyi pɛpɛɛpɛ na nea Yosef kaeɛ no baa mu. Farao dii n’awoda, nanso Onyankopɔn asomfoɔ a wɔtenaa ase tete no mu biara nni hɔ a ɔdii n’awoda. Berɛ a Farao dii n’awoda no, ɔbuu n’asomfoɔ mmienu atɛn. Sɛnea Yosef kaeɛ no, wɔkum paanootofoɔ no, na nsahyɛfoɔ no deɛ wɔsan de ne dibea maa no. Nanso awerɛhosɛm ne sɛ, saa ɔbarima no werɛ firii Yosef koraa.—Genesis 40:20-23.
“ME DEƐ, MENE HWAN?”
Mfeɛ mmienu atwam. (Genesis 41:1) Wo deɛ hwɛ sɛnea Yosef bɛteetee! Berɛ a Yehowa maa no hunuu nea nsahyɛfoɔ no ne paanootofoɔ no daeɛ kyerɛ no, ɛbɛyɛ sɛ ɔnyaa anidasoɔ paa. Ɛno nti, da biara a Yosef bɛda asɔre no, na ɛyɛ no sɛ da no deɛ ɔnna hɔ bio, nanso nea ɔbɛhunu ara ne sɛ adeɛ asa a hwee nsesaeɛ. Ɛbɛyɛ sɛ saa mfeɛ mmienu no ne berɛ a asetena mu yɛɛ den paa maa Yosef. Nanso ɔkɔɔ so de ne ho too Yehowa, ne Nyankopɔn no so; wampa aba da. Sɛ́ anka ɔbɛte nka sɛ anidasoɔ asa no, ɔmiaa n’ani gyinaa pintinn wɔ ahokyerɛ a ɔkɔɔ mu no nyinaa mu; ɛno maa ne gyidie yɛɛ den.—Yakobo 1:4.
Yɛhwɛ sɛnea wiase rekɔ yi a, ɛhia sɛ yɛn nyinaa bɔ mmɔden nya akokoɔduro na yɛn abam ammu. Onyankopɔn nko ara na ɔbɛtumi ama yɛanya akokoɔduro, aboterɛ, ne asomdwoeɛ a yɛhia na ama yɛatumi atena wiase a ɔhaw ahyɛ mu mã yi mu. Sɛnea Onyankopɔn boaa Yosef maa no gyinaa sɔhwɛ mu a wampa aba no, saa ara na ɔbɛtumi aboa yɛn ama yɛakɔ so akura anidasoɔ a yɛwɔ no mu.—Romafoɔ 12:12; 15:13.
Ebia nsahyɛfoɔ no werɛ firii Yosef, nanso Yehowa deɛ, ne werɛ amfiri no da. Da koro anadwo bi, Yehowa maa Farao soo daeɛ mmienu bi a ɔhene no werɛ amfiri da. Daeɛ a ɛdi kan no mu no, ɔhunuu sɛ anantwie nson a wɔn ho yɛ fɛ na wɔadɔ sradeɛ apue afiri Nil asubɔnten no mu, afei, ɔhunuu anantwie a wɔn ho yɛ tan na wɔafomfɔn. Anantwie a wɔafomfɔn no memenee anantwie a wɔadɔ sradeɛ no. Akyire yi Farao san soo daeɛ, na ɔhunuu ayuo mmɛtem akɛseɛ a ɛyɛ fɛ nson sɛ ɛrepuepue dua korɔ so. Afei ayuo mmɛtem nson foforɔ nteaanteaa a ɛpɛ berɛ mframa ama atwintwam nso dii akyire baeɛ, na ɛmemenee ayuo mmɛtem akɛseɛ nson a ɛyɛ fɛ no. Adeɛ kyeeɛ no, daeɛ no nti na Farao ho yera no. Enti ɔfrɛɛ anyansafoɔ ne akɔmfoɔ a wɔwɔ Egypt nyinaa sɛ wɔmmɛkyerɛ no daeɛ no ase. Nanso, wɔn mu biara antumi ankyerɛ aseɛ. (Genesis 41:1-8) Sɛ daeɛ no na na ɛyɛ wɔn nwanwa oo, anaasɛ nkyerɛaseɛ no na na ɛsono obiara deɛ oo, yɛrentumi nkyerɛ. Nea yɛbɛtumi aka ara ne sɛ wɔdii Farao hwammɔ, na ɛno maa n’ani beree paa sɛ ɔbɛhwehwɛ obi ama wakyerɛ no daeɛ no ase.
Esiane sɛ ɛnkyɛ-nkyɛ wɔ n’afe nti, afei deɛ nsahyɛfoɔ no kaee Yosef! Nsahyɛfoɔ no ahonim haa no, na ɛno maa no kaa aberanteɛ bi a mfeɛ mmienu a na atwam no ɔkyerɛɛ ne daeɛ ase maa no no ho asɛm kyerɛɛ Farao. Ntɛm ara, Farao soma maa wɔkɔfaa Yosef firii afiase hɔ baeɛ.—Genesis 41:9-13.
Wo deɛ, hwɛ sɛnea Yosef bɛte nka berɛ a Farao nkoa no baa sɛ wɔrebɛfa no akɔ ahemfie no. Ɛhɔ ara na ɔsesaa ne ho, yii n’abɔdwesɛ, ne ebia ne tiri nwi nyinaa sɛnea na Egyptfoɔ amammerɛ teɛ no. Ɛnyɛ dɛn ara a ɔbɔɔ mpaeɛ sɛ Yehowa mmoa no na biribi pa bi mfiri frɛ a wɔafrɛ no no mu mmra. Ankyɛ koraa na wɔduruu ahemfie hɔ, na wɔde no kɔgyinaa ɔhene anim. Bible ka sɛ: “Farao ka kyerɛɛ Yosef sɛ: ‘Maso daeɛ bi, nanso obiara ntumi nkyerɛ aseɛ. Na mate wo nka sɛ wo deɛ, wote daeɛ a, wotumi kyerɛ aseɛ.’” Ɛha nso, mmuaeɛ a Yosef de maa ɔhene no ma yɛhunu sɛ ɔbrɛ ne ho ase na ɔwɔ Onyankopɔn mu gyidie. Ɔkaa sɛ: “Me deɛ, mene hwan? Onyankopɔn na ɔbɛma Farao ate asɛm a ɛyɛ.”—Genesis 41:14-16.
Yosef de ahobrɛaseɛ ka kyerɛɛ Farao sɛ: “Me deɛ, mene hwan?”
Yehowa ani gye nnipa a wɔdi nokorɛ na wɔbrɛ wɔn ho ase no ho paa, enti ɛnyɛ nwanwa sɛ Yehowa maa Yosef tumi kyerɛɛ daeɛ a Egypt anyansafoɔ no antumi ankyerɛ aseɛ no ase. Yosef kyerɛɛ mu sɛ daeɛ mmienu a Farao soeɛ no nkyerɛaseɛ yɛ baako. Ɔkyerɛɛ nea enti a Onyankopɔn maa no soo daeɛ no mmienu no; ɛne sɛ, na Yehowa de resi so “dua” sɛ sɛnea ɛteɛ biara, nea waka no bɛba mu. Anantwie a wɔadɔ sradeɛ ne ayuo mmɛtem akɛseɛ no kyerɛ sɛ aduane bɛbu so mfeɛ nson wɔ Egypt asase so. Ɛnna anantwie a wɔafomfɔn ne ayuo mmɛtem nteaanteaa no nso, ɛkyerɛ sɛ ɛkɔm bɛba Egypt mfeɛ nson wɔ aduane berɛ no akyi. Ná ɛkɔm a ɛbɛba no bɛdosa asase no nyinaa.—Genesis 41:25-32.
Farao hunuu sɛ Yosef akyerɛ daeɛ no ase pɛpɛɛpɛ. Nanso dɛn na na Farao bɛtumi ayɛ wɔ asɛm no ho? Yosef kyerɛɛ nea ɔbɛtumi ayɛ. Ná ɛsɛ sɛ Farao hwehwɛ ɔbarima a ‘n’adwenem da hɔ na ɔnim nyansa,’ na ɔhwɛ ma wɔboaboa aduane ano gu adekora adan mu wɔ mfeɛ nson a aduane bɛbu so no mu, na ɛkɔm no ba a wɔakyekyɛ ama ahiafoɔ. (Genesis 41:33-36) Nimdeɛ ne nyansa a na Yosef wɔ nti, na ɔbɛtumi ayɛ adwuma no ama aboro so, nanso wankamfo ne ho. Ná ɔwɔ gyidie ne ahobrɛaseɛ, ɛno nti amma ne koma mu da sɛ ɔbɛyɛ saa. Sɛ yɛwɔ gyidie paa wɔ Yehowa mu a, ɛremma da sɛ yɛbɛhyɛ yɛn ho animuonyam. Afei, biribiara mu no, yɛbɛnya ntoboaseɛ na yɛatwɛn Yehowa!
“ONIPA BƐN NA YƐBƐNYA NO A ƆTE SƐ OYI?”
Farao ne ne nkoa nyinaa hunuu sɛ Yosef aka nyansasɛm. Ɔhene no gye toom nso sɛ asɛm a Yosef aka no firi Yosef Nyankopɔn no hɔ. Ɔka kyerɛɛ ne nkoa a wɔwɔ ahemfie hɔ nyinaa sɛ: “Onipa bɛn na yɛbɛnya no a ɔte sɛ oyi a Onyankopɔn honhom wɔ ne soɔ yi?” Afei ɔka kyerɛɛ Yosef sɛ: “Sɛ Onyankopɔn ama woahunu yeinom nyinaa a, ɛnneɛ obi foforɔ biara nni hɔ a n’adwenem da hɔ na ɔnim nyansa sɛ woɔ. Mede me fie bɛhyɛ wo nsa, na me manfoɔ nyinaa bɛtie deɛ wobɛka biara. Adwa a mete soɔ yi nko ara na mede bɛsene woɔ.”—Genesis 41:38-41.
Farao de ɔseɛ yɛɛ ɔyɔ. Ɛhɔ ara, ɔde atadeɛ a wɔde nwera ayɛ hyɛɛ Yosef. Afei ɔde sika kɔnmuadeɛ guu ne kɔn mu na ɔde ne pɛtea hyɛɛ ne nsa. Farao san maa no tenaa ne teaseɛnam mu, na ɔmaa no kwan sɛ ɔmfa nkɔ baabiara a ɔpɛ na ɔmfa nyɛ n’adwuma. (Genesis 41:42-44) Yosef a ɔda afiase na prɛko pɛ wabɛyɛ ɔdehyeɛ yi! Ɔda sɔree anɔpa no na ɔda afiase, nanso adeɛ saeɛ a ɔrekɔda no, na ɔyɛ Farao abadiakyire. Wei da adi pefee sɛ, gyidie a Yosef nyaa wɔ Yehowa Nyankopɔn mu no anyɛ ɔkwa! Ahohiahia a Yosef kɔɔ mu mfeɛ bebree no, Yehowa hui, na ɔyɛɛ ho biribi berɛ a ɛsɛ mu ne ɔkwan a ɛfata so. Ná Yehowa pɛ sɛ ɔyi Yosef firi ahokyerɛ mu na ɔsan bɔ Israel man a na wɔbɛba daakye no ho ban. Ɔwɛn-Aban foforɔ bɛba abɛkyerɛkyerɛ saa asɛm no mu.
Sɛ sɔhwɛ bi to wo anaasɛ nnipa bi ne wo anni no yie na ɛte sɛ nea woyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie a, mma w’abam mmu. Ɛba saa a, kae Yosef. Esiane sɛ na ɔdwene nnipa ho, ɔbrɛ ne ho ase, ɔde akokoɔduro gyinaa pintinn na ne gyidie ansɛe da nti, ɛwiee aseɛ no, ɔmaa Yehowa nyaa biribi gyinaa so hyiraa no.
^ nky. 4 Hwɛ asɛm a wɔato din “Suasua Wɔn Gyidi” a ɛwɔ August 1 ne November 1, 2014, Ɔwɛn-Aban mu no.
^ nky. 10 Tete Egyptfoɔ no, na wɔwɔ paanoo ahodoɔ ahodoɔ bɛboro 90. Enti, na Farao paanootofoɔ panin no nyɛ nipa ketewa koraa. Farao berɛ so no, na nkurɔfoɔ taa fa ahemfo ho adwemmɔne anaa wɔkum wɔn. Ne saa nti, na Farao wɔ nkoa a wɔhwɛ ma ɔnya nsã papa, na awuduro biara nso nnim; nsahyɛfoɔ panin no na na ɔda wɔn ano. Ná nsahyɛfoɔ panin yɛ obi a wɔgye no di, enti na ɔtaa yɛ ɔhene no fotufoɔ.
Yosef abusua no, na emu nsɛm dɔɔso, nanso ɛnnɛ, mmusua a mmanoma wom betumi asua biribi a ɛho hia afi saa abusua no mu.
Sɛ yesua mmarima ne mmea a wɔwɔ gyidi a Bible ka wɔn ho asɛm no ho ade a, mfaso bɛn na yebenya afi so nnɛ?